Faah faahin ku saabsan maalinka AROOSKA Lionel Messi – Gool FM
Faah faahin ku saabsan maalinka AROOSKA Lionel Messi
(Catalonia) 07 Juunyo 2017. Waxaa la xaqiijiyay in Lionel Messi uu la aqal gali doono gabadha ay wada socdeen tan iyo yaraantoodii Antonella Roccuzzo 30-ka bisha June.
Xaflada Arooska ayaa ka dhici doonta Hotel Pullman ee ku yaala bartanka magaalada Rosario ee dalka Argentina, halkaa oo ku dhawaad 250-ka qol uu ka kooban yahay Hotel ka loo kireeyay martida si ay u joogaan.
Weli lama garanayo oo waa sir dadka sida saxda ah ugu jira liiska la casuumay, inkastoo la xaqiijiyay in dhammaan 21-ka laacib uu ka kooban yahay safka hore ee Barcelona lagu casuumay xaflada.
Qaar kaloo badan oo ka kooban shaqaalaha Blaugrana ayaa sidoo kale soo xaadiri doona, laga soo bilaabo kuwa ka shaqeeya maaliyadaha ilaa kuwa jimicsiga.
Haseyeeshee, lama casuumin xubnaha sare ee kooxda Barcelona, sidoo kale Luis Enrique, Juan Carlos Unzue, Joaquin Valdes, Robert Moreno iyo Rafel Pol ayaan midkood lagu casuumin xaflada aroos ee Messi.
Hobolada Rombay ee ka soo jeeda Uruguey kuwaa oo saaxiib la ah Luis Suarez ayaa noqon karaya dooq inay ka tumaan xaflada Aroos ee xiddiga reer Argentina.
Warar hoose ayaa iyana sheegaya inay bandhig yar xaflada ka sameyn karto gabadha heysta ee saaxiibta la ah Serigio Aguero ee La Princesita Karina.
Berbara Diez ayaa markii hore loo dhiibay qorshaha iyo dooqa labiska labada lamaane, laakiin waxaa markii dambe dhacdada arooska loo gacan galiyay Farina-Pavia Celebrations & Style.